October « 2011 « lunnsetnoemyat
`ဒြပ်မဲ့´ဟူသော အမည်ခပ်ဆန်းဆန်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး၏ ထောင့်ကျကျ စားပွဲတစ်လုံးတွင် ကျွန်တော်ထိုင်နေ ပါသည်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင်လည်း ခေတ်ပေါ်ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် ကိုင်ထားကာ သွေးကြောထဲ စကားလုံးတွေ စိမ့်ဝင်သွားလောက်အောင်ဖတ် ရှုနေခဲ့၏။ အိမ်က အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း (သို့မဟုတ်) အခြားသင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရန် ပေးသောငွေများအား ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ထဲ လာရောက်၍ စီးကရက်အချို့နှင့် ကဗျာစာအုပ်များပေါ် ကျွန်တော် ဖြုန်းတီးပစ်တတ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်လောက်မှ စတင်ပြီး (ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်နားဆီက ဖြစ်မည်ထင်သည်။) ကျွန်တော်သည် အရာရာကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခဲ့၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းအစမှာ မဂ္ဂဇင်းတိုက်များသို့ ပေးပို့လိုက်သော ကျွန်တော့ကဗျာစာမူများ တစ်ပုဒ်တစ်လေမှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံ ရခြင်းမရှိသည်က စတင်မည်ဟု ယူဆရလေသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အချိန်ကာလ၊ အောင်မြင်မှု၊ အမှန်တရား၊ အဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတစ်ရာတိကျမှုနှင့် တခြား အရာအတော်များများကိုလည်း ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အရာရာကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာသောအခါ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ အများစုသည် အတုအယောင်များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်တော်တက်နေသော သင်တန်းများသည် ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ရိုက်ချသော လက်တံ မည်းများ ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြသော နှုတ်ခမ်းများတွင် ဓားပါးလေးများ တပ်ဆင်ထားခြင်းကို သိရှိရပြီး ချစ်သူကောင်မလေးများ၏ မျက်လုံးတွေထဲတွင်လည်း ငွေထုပ်နှင့် အိုးအိမ်တိုက်တာများကို ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာ မြင်ရလေသည်။
“ရှင့်မျက်နှာက ကြေးဝါရုပ်တစ်ရုပ်လို အေးစက်စက်နဲ့… ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် နွေးထွေးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ရှင့်မျက်နှာဟာ ဘယ်တော့မှ မပျော့ပျောင်းခဲ့ဘူး´´
ကျွန်တော်နှင့် ချစ်သူမဖြစ်သေးသော ကောင်မလေးက လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို ဇွန်းဖြင့်မွှေရင်း ပြောပါသည်။ သူမသည် ဤလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးသို့ မကြာခဏရောက်ရှိကာ ကျွန်တော့် လက်ထဲမှ ကဗျာစာအုပ်များကို လုဖတ်တတ်သူလည်း ဖြစ်လေသည်။
“ကိုယ့်ကို တကယ်တမ်း နားလည်ဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူဟာ ဒီကမ္ဘာမှာ တစ်ယောက်တည်း ရှိတယ်…အဲဒီ့သူက ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ´´
ကျွန်တော့်စိတ္တဇအား စာနာနားလည်ပေးမည့်သူသည် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ယောက်တော့ရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည့် ကာလများတုန်းကတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာသည် အမှန်တကယ်ပင် နွေးထွေးပျော့ပျောင်းခဲ့ဖူးပါသည်။
တစ်ရက်တွင် အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသည့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေစစ်တချို့ထဲမှ ကျူရှင်ဆရာဖုန်းမြင့်နှင့် မြို့ထဲ၌ ဆုံမိလေသည်။ အကူအညီ တောင်းခြင်း၊ စပ်စပ်စုစုမရှိခြင်းနှင့် သိုသိပ်စွာနေထိုင်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းတုန်းကတည်းကပင် ကျွန်တော်နှင့် စည်းဝါးကိုက်ညီခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်၏။
“ငါ အခု နိုင်ငံခြားသင်္ဘောလိုက်မလို့ လုပ်နေတယ်ကွ။ အမေ့ဘက်က ဦးလေးတစ်ယောက်ကူညီလို့ပေါ့… ဘ၀ဆိုတာ နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားသခင် အလိုတော်အရပါပဲကွာ´´
ပထမအကြိမ် ဆုံကြစဉ်ကတော့ ဖုန်းမြင့်သည် ကျူရှင်ဆရာလုပ်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ဝက်လောက်မှာပဲ သူ့ကျူရှင်အောင်မြင်နေခြင်းအား တစ်ဆင့်စကားဖြင့် ကြားသိခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကျောင်းပြီးကတည်းက ဘာအလုပ်မှ ရေရာစွာ မလုပ်ကိုင်ဖြစ်ပဲ အရာရာကိုသာ ယုံကြည် မှု လျော့နည်းလာခဲ့လေသည်။ ထိုကိစ္စသည် ရောဂါပိုးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ယဉ်နွဲ့ (ကျွန်တော့် ကဗျာစာအုပ်များကို လုဖတ်တတ်သော ကောင် မလေး) ကိုလည်း ထိုရောဂါ ကူးစက်နေနိုင်ပါသည်။
“ရှင့်ရဲ့ ရုပ်တုဆန်ဆန် မျက်နှာပေါ်က လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ကျွန်မ တွေ့ရှိနေရပြီ´´
ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်မှု၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကဗျာစာအုပ်တွေထဲ၌ ရှာဖွေနေခဲ့ပါသည်။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေသော အတိတ်တစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးသည် ကို ယုံကြည်ပါသည်။ ရင်ဘတ်ဘယ်ဖက်ထောင့်မှာ အဲဒီအကြည့်တွေ တိတ်တခိုးသိမ်းဆည်းထားကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ မည်သူမျှ မတွေ့ မမြင်ခင်မှာ ပုပ်သိုးပျက်စီးသွားသော ရွက်ပုန်းသီးတစ်လုံး၏ ဘ၀ကိုလည်းယုံကြည်ပါသည်။ ကံတရား၏ ခါထုတ်ငြင်းဆန်မှုအောက်က ကွဲကွာသွား ရသော မိသားစုဘ၀တွေရှိကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။ ပြည့်စုံကြွယ်ဝစွာဖြင့် ခေါင်းငုံ့နေရခြင်းများအားလည်း ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ယုံကြည် မှု၏ လျှို့ဝှက်ချက်အား ကဗျာစာအုပ်တွေထဲတွင် ကာလကြာမြင့်စွာ ရှာဖွေနေခဲ့၏။
စကြ၀ဠာတွင်းနက်ကြီးများ တည်နေပုံကို ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ ထို့ကြောင့် စကြ၀ဠာအကြောင်း ပြောဆိုသည့် စကားဝိုင်းများတွင် ကျွန်တော် ဘယ် တုန်းကမှ မပါဝင်ခဲ့ဖူးပါ။ နယူတန်၏ အင်တီဂရယ်၊ ဒီဖရန်ရှယ် သင်္ချာတွက်နည်းများကိုလည်း နားမလည်ပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်သင်္ချာ ဘာသာဖြင့် တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် ကျရှုံးခဲ့ရသည်။ မိဘမေတ္တာကိုတော့ အတန်ငယ် နားလည်သလိုလို ရှိသည်။ ဒါကလည်း သားမိုက်ဖြစ်ဖူးမှ သိနိုင်မည့် အသိဖြစ်၏။ ကျွန်တော် နားမလည်သည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် ကျွန်တော်ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် မဖြေရှင်းတတ်သည်မှာ သဘာဝကျပါသည်။ နားလည်မှု ကိစ္စရပ်များတွင် ယုံကြည်ချက်တွဲစပ်နေကြောင်း ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသောအခါ…ကျွန်တော် ယုံကြည်မှုမရှိသည်မှာ ထိုယုံကြည်ခြင်း များပင် ဖြစ်လေ သည်။
“ကိုယ်က ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်မှုကို စောင့် မျှော်နေတာ လို့…. ယုံကြည်ရတာပဲ´´
ယဉ်နွဲ့ကို ကျွန်တော်မပြောပြဖြစ်ခဲ့သော စကားဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ထိုစကားပြောရမည့်အစား ပထမအကြိမ်အဖြစ် သူမကို ကျွန်တော် ခိုးနမ်း ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝတရား၊ ကြည်နူးထိတွေ့မှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ဖို့ထက် ခံစားဖို့သာ ပိုလိုအပ်ကြောင်း သူမရော ကျွန်တော်ပါ စောစောပိုင်းက တည်းက သဘောပေါက်ထားကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
“လူဆိုတာ ဘုရားသခင်က ကိုယ့်ကို ဘာပေးလိုက်တယ်ဆို တာ သိဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်´´ဟု ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ် က ပြောဖူးခဲ့ပါသည်။ “ဘ၀ဆိုတာ နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားသခင်အလိုတော် အရပါပဲကွာ´´လို့ ပြောခဲ့သော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကျူရှင် ဆရာဖုန်းမြင့် တစ်ယောက် ယခုအခါ ကမ္ဘာ့မြေပုံရဲ့ မည်သည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိနေပါသနည်း။
ယဉ်နွဲ့ဆိုသော ခပ်လှလှကောင်မလေးကတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှ ရောဂါပိုးတစ်မျိုး ကူးစက်ခြင်းခံနေရသော်လည်း သူမတွင် ထိုရောဂါကို ခုခံကာကွယ်နိုင် သည့် ကိုယ်ခံအားနည်းလွန်းနေသေးကာ သူမအား ကျွန်တော့်လို လေလွင့်စက္ကူတစ်ရွက် မဖြစ်စေချင်ကြောင်း တစ်ချိန်ချိန်တွင် သူမ ယုံကြည်အောင် တိတိကျကျ ကျွန်တော်ပြောပြရပါလိမ့်မည်။
သော့ခတ်ထားသော တိမ်တိုက်တစ်ခုရှိနေသည်ကို သင်ယုံကြည်ပါသလား။ မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုကြောင့် သော့ပွင့်သွားကာ တိမ်တိုက်ထဲမှ အငွေ့ တထောင်းထောင်းကြေကွဲမှုများ ရွာကျလာသည်ကို ယုံကြည်ပါ။ ရေမီး အစုံအလင်နှင့် နာဖျားနေသော ချစ်ခြင်းတရားများ ရွာကျလာသည်ကို ယုံကြည် ပါ။ ပြန်လည်တပ်မက်နိုင်စရာမရှိတော့သော ခရမ်းပြာရောင် ပန်းသီးပုပ်တစ်လုံး ရွာကျလာသည်ကို ယုံကြည်ပါ။ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေသော စန္ဒရား အခွံတစ်လုံးနဲ့ တယောထိုးတံတစ်ချောင်း ရွာကျလာသည်ကို ယုံကြည်ပါ။ ငါပဲသိ ငါပဲတတ် လူတန်းစားတစ်ရပ် ရွာကျလာသည်ကို ယုံကြည်ပါ။ ဒါမှ မဟုတ် ဘာကိုမှ မယုံကြည်ပါနှင့်။
ထိုနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၍ ယခင်တနင်္ဂနွေနေ့များအတိုင်း မြို့စွန်ရှိ တောင်ကုန်းကလေးပေါ်မှနေလျက် ကောင်းကင်ပြာပြာထဲသို့ စက္ကူစွန်တစ်စင်း ကျွန်တော်လွှတ်တင်နေခဲ့သည်။ (ကျွန်တော်၏ `ယုံကြည်မှုလိပ်ပြာ´ဟူသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ထိုရက်များအတွင်းက စတင်ရေးဖွဲ့နေခဲ့ပါသည်။) စက္ကူစွန်လေးကို ကြိုးအဆုံးလွှတ်တင်ပြီးသည့်အခါ ကျွန်တော်သည် ရစ်ဘီးတွင် နောက်ဆုံးကျန်ရှိချည်နှောင်ထားသော ကြိုးစအား အခါတိုင်းလို ပင် ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါသည်။ အရံအတားကင်းမဲ့သွားသော အဝေး ကောင်းကင်မှ စက္ကူစွန်လေးကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ကူးများသည်လည်း လွတ်လပ်လို့ ရှိနေပါသည်။
ကောင်းကင်ပြင်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာသို့ လွှတ်တင်ပြီးမှ ကြိုးလွှတ်ခြင်းခံလိုက်ရသော စက္ကူစွန်တစ်စင်း၏ လွတ်လပ်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော လွတ် လပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်ပြင်တွင် တစ်ခဏမျှသာ လွတ်လပ်ခွင့်ရပြီး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံလိုက်ရသော စက္ကူစွန်လေးများ၏ ဘ၀သည် လှပလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ကျွန်တော် မည်သည့် အခါကမှ မယုံကြည်ခဲ့မိဖူးပါ။
“ကျွန်မ ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ပျော်ရွှင်တယ်။ လွတ်လပ်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကွယ်ရာမှာ… သူတို့ယုံကြည်တဲ့ အရာတော်တော်များများကို ရှင့်လိုပဲ ဆန့်ကျင်ရတာ ကျေနပ်တယ်´´
“မင်းဟာ ကိုယ်နဲ့တွေ့တာ သိပ်စောလွန်းနေပါသေးတယ်… တကယ်တော့ မင်းက ကိုယ့်ကိုသဘောကျတာ မင်းမိဘတွေရဲ့ အချုပ်အချယ်အောက် ကနေ ရုန်းထွက်ချင်နေတဲ့ မသိစိတ်ကြောင့်ပဲ´´
ယဉ်နွဲ့မိဘများသည် အရာရာကို ငွေဖြင့်ပေးဝယ်၍ရသည်ဟု အယူရှိကြသည့် တခြားသော ပိုက်ဆံရှိသူတွေအတိုင်း သူတို့သမီးကို အကောင်း ဆုံးကျောင်းမှာ ထားပြီး အကောင်းဆုံးစည်းကမ်းများနှင့် နေစေကာ အချိန်တန်လျှင် ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ခုသို့ လွှတ်ရန်အထိ စနစ်တကျ စီစဉ်တွက် ချက်ထား ကြပြီးဖြစ်၏။ သူမ၏ ဘ၀သည် အိပ်ချိန်ကလွဲလျှင် ပုံသေဇယားကွက်ထဲမှာသာ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သည့် သူမ အတွက် ဇယားကွက်တွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု။ သူမတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာ အိမ်က သူဌေးသားမျက်နှာရူးတစ်ယောက်နှင့် စေ့စပ်ပေးသည်။ သူမနှင့် စေ့ စပ်ပေးသော သူဌေးသားဆိုသူသည် သူမနှင့်တစ်ကျောင်းတည်း အတူတက်နေတော့ ပိုဆိုးသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမလည်း လောကကို တစ်စတစ်စ ဆန့်ကျင်တတ်လာခဲ့သည်။ သူမ ဒုတိယနှစ်မှာ အပေါင်းအသင်းတချို့ဖြင့် ကျောင်းပြေးပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်လာသည်။ ငါးမျှားတတ်လာသည်။ လိုင်းကားတိုးစီးတတ်လာသည်။ နောက်… ကျွန်တော်နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။
“သမီး… ဘုရားသခင်ပြီးရင် လူတွေကိုးကွယ်ကြတာ ငွေပဲ… ဖေဖေတို့ထက် ပြည့်စုံတဲ့ မောင်ကျော်သက်တို့ မိသားစုထဲ သမီးဝင်ရမယ်… အဲဒီ့အတွက် သမီး မောင်ကျော်သက်ကို လက်ထပ်ရလိမ့်မယ်´´
သူမ ပထမအကြိမ်ကျောင်းပြေးခြင်းကို သိရှိပြီးနောက် သူမ ဖခင်ပြောခဲ့သော စကားဖြစ်သည်။ သူမက ကျွန်တော်နှင့် သိကျွမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ထိုအဖြစ် အပျက်များကို ခူကောင်တစ်ကောင်ကို ကိုင်ထားရသူလို ရွံရှာစွာ ပြောပြခဲ့၏။ ကဗျာဆရာမောင်ချောနွယ်၊ ကျူရှင်ဆရာဖုန်းမြင့် (သို့မဟုတ်) သင်္ဘော သားဖုန်းမြင့်၊ ယဉ်နွဲ့ဖခင် အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပုံရသည်။ ဘုရားသခင်က ကိုယ့်ကို ဘာပေးသလဲ သိရမည်ဆိုသူ၊ ဘ၀ဆို တာ နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားသခင် အလိုတော်အရလို့ ဆိုသူ၊ ဘုရားသခင်ပြီးရင် လူတွေ ကိုးကွယ်ကြတာ ငွေပဲလို့ ဆိုသူ၊ ထိုသူတွေအားလုံးကြားတွင် ကျွန်တော်သည် ဘုရား သခင်မေ့လျော့နေသော ဇာတ်ကောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပုံရသည် ဟု ယုံကြည်မိသည်။
ငယ်ငယ်က နားထောင်ခဲ့ရသော အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေထဲတွင် ကျွန်တော်သည် ဓားတစ်လက်ကို ကိုင်စွဲ၍ ဗူးပင်ကြီးများကို ရှင်းလင်းကာ ငှက်ကြီး ကို နှိမ်နင်းရသည့် သူရဲကောင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ကလေးချင်းဆော့ကစားသည့်အခါ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းဝါဒကို မုန်းတီးပြီး မဟုတ်မခံချင်စိတ်ရှိသော ကလေး ငယ်တစ်ယောက်မှာ ကျွန်တော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ရောက်လာတော့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက် ဒါမှ မဟုတ် အောင်မြင်သည့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ရမည်ဟု ယုံကြည် မိခဲ့သည်။ အခုတော့…
အခုတော့ အဲဒီ့ယုံကြည်မှုတွေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တခုတ်တရ ဖန်ဆင်းအပ်သော အလင်းဖန်လုံအိမ်ကလေးတစ်လုံးအား ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့သစ်တွင် အကြင်နာ လက်အ စုံဖြင့် ဆက်သပါမည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလို စိတ်ကူးယဉ်လို့ မရတော့။ ကျွန်တော်နှင့် သိပ်မရင်းနှီးသော်လည်း အဲဒီကောင်ကျွေးသော ထမင်းကို ဆာဆာနှင့် စားပစ်လိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလို မရှက်တတ်တော့။ ဂျွတ်တက်နေသည့် ဦးနှောက်တွေအောက်တွင် ရာသီပေါင်း များစွာ ကျွန်တော်ဝပ်ဆင်းနေရ၏။ နောက်တော့ အဲဒီ့ကောင်ရဲ့ လေးယောက်မြောက်ညီက ကျွန်တော့်ကို တင်တင်စီးစီး ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်တော် မဂ္ဂဇင်းတိုက်များသို့ စာမူပို့သောအခါ တချို့မဂ္ဂဇင်းတိုက်များက ကျွန်တော့်လို ပုရွတ်ဆိတ်ကလောင်လေးများအား အသွင်အပြင် အပြုအမူ အပြောအဆို အားဖြင့် အထက်စီးမှ ဆက်ဆံတတ်ကြ၏။ အနည်းစုသော မဂ္ဂဇင်းတိုက်များကတော့ စာမူပို့သူကို တူတူတန်တန် ဆက်ဆံကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် ထိုကိစ္စတွေကို ငယ်ငယ်ကလို နာကျင်ရမှန်းမသိတော့….။
ပိုးကိုက်နေသည့် ပန်းသီးတစ်လုံးကို ခွဲလိုက်သောအခါ ချိုမြိန်မှုကင်းမဲ့နေသော ယုံကြည်ခြင်းများကို တွေ့မြင်ရလေ၏။
မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံး နေရာအနှံ့ ကံ့ကော်ပန်းများပွင့်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် ယဉ်နွဲ့နှင့်ကျွန်တော် ပန်းဆိုးတန်းသို့ ကဗျာစာအုပ် အ၀ယ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ `ဒြပ်မဲ့´လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှနေ၍ ပထမဆုံးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အတူတွဲပြီး စာအုပ်ဝယ်ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုသာယာသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့် မြို့လမ်းမကျယ် ကြီးများပေါ်တွင် ယာဉ်အမျိုးမျိုး၊ လူအမျိုးမျိုး ထူထပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြ တာ မြင်နေရသည်။ သူမကတော့ ဧရာမစာအုပ်ပုံကြီးတွေကို ငေးနေရင်း အပြစ်ကင်းစင်စွာ ပျော်မြူးသွက်လက်နေပုံရ၏။ “လာ… လာ… လမ်း ဟိုဖက် ကူးကြရအောင် ဟိုဖက်မှာ ပိုများတယ်´´သူမက ပြောပြောဆိုဆို လမ်းမပေါ် ပြေးဆင်းသွားသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် လမ်းပေါ်သို့ တစ်ဖက်မှ ကွေ့ချလာ သည့် ကားတစ်စင်း..ရိပ်ခနဲ ကျွန်တော် လှုပ်ရှားလိုက်သည်။
နှင်းမြူတွေ ကြားထဲ ကျွန်တော်ရောက်နေသည်။ နှင်းမြူတွေက ချက်ချင်းနီသွား၊ အနီရောင် ရိုးသားမှုတစ်ခု၊ မနေ့က ပွင့်ခဲ့တဲ့ ကံ့ကော်တွေ၊ နားထဲ မှာ လေတွေ… လေတွေ… တ၀ူးဝူး၊ ခေါင်းက တဆစ်ဆစ်နဲ့၊ နာကျင်မှုလား၊ လက်တစ်ဖက်၊ ဗလုံးဗထွေးစကားသံများ တိုးရာမှကျယ်၊ ကျယ်ရာမှ တိုး။ နေခဲ့ပါ။ လိုက်မသွားပါနဲ့၊ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ မဟုတ်ဘူး၊ အား။
တစ်ခါက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မိန်းမပီသတဲ့အသံလို့ ပြောဖူးခဲ့သည့် အသံတစ်ခုကို နီးကပ်စွာ ကြားရသည်။
“ရှင်ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ… ရှင်ဘာဖြစ်လို့… ကျွန်မ ကိုယ်စား ၀င်လိုက်ရတာလဲ… ရှင်နဲ့စာရင်… ကျွန်မပဲ ဖြစ်သင့်တာ လေ.. အို.. ရှင်.. ရှင်ရယ်´´
ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ဖေးမပေးထားသော သူမလက်ရဲ့ အပွေ့ကို သိနေသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှ စိမ့်ထွက်ပူနွေးနေသော အရာများကို သွေးဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်။
“ညီမနားထောင်နော်.. ကိုယ်… ကိုယ်လေ… (ဒီနေရာ မှာ ကျွန်တော် ချောင်းတစ်ချက်နှစ်ချက် ဆိုးသင့်မှန်း သိသော်လည်း ခပ်ညံ့ညံ့ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ် ကနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ချက်ချင်းပဲ အမှတ်ရမိသွား၏) ကိုယ်…. အခုပဲ… တွေ့…ပြီ´´
ဘေးဘီဝဲယာမှ အုံဆိုင်းညို့မှိုင်းလှုပ်ရှားနေကြသော လူအုပ်ဆီမှ စကားသံမျိုးစုံကို ကျွန်တော်ကြားနေရသေးသည်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ဖျပ်ခနဲဖျပ်ခ နဲ ခုန်လှုပ်နေသည့် ၀ိညာဉ်အရိပ်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်လေထု ထဲ၌ တလွင့်လွင့်ဝဲပျံကာ နေသည်။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးသည် နောက်တစ်ကြိမ် မနာကျင်နိုင်တော့သည့်အလား နာကျင်လွန်းလျက်ရှိ၏။
“အို… ရှင် စကားသိပ်မပြောနဲ့လေ´´
“ကိုယ် အမြဲတမ်းရှာဖွေနေတဲ့… အရာလေ´´
`ဘာကိုလဲ၊ ရှင်ဘာကို တွေ့တာလဲကွယ်´´
သူမက ကျွန်တော့်ပြောစကားကို အံ့အားသင့်သွားသလို သံယောင်လိုက် ရေရွတ်လိုက်လေသည်။
ဆံပင်အလယ်ခွဲနဲ့ နက္ခတ် ၀တ္ထုတိုစု(တာရာမင်းဝေနှင့်တစ်ခြမ်းစီ)၊ဖက်ရှင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၇
2 Comments Posted in လွန်းဆက်နိုးမြတ် ၀တ္ထုတိုများ
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် အဆိုပါကြေညာသည် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ဆက်တိုက် ပါရှိလာခဲ့ပါသည်။ သတင်းစာများတွင် ယခုလို ကြေညာများ မကြာခဏပါရှိတတ်ခြင်းမှာ အဆန်းမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော်သည် ဤကြေညာအား ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘဲ တွေ့တွေ့ချင်းမှာပင် စိတ်ဝင်စားသွားမိပါသည်။ ကြေညာမှာ သတင်းစာ၏ အလျဉ်းသင့် သောနေရာများတွင် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ဖော်ပြပါရှိခဲ့ခြင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေသည်။ အများအားဖြင့် နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ယခုလို နေ့စဉ်ရက် ဆက်ပါရှိတတ်သော ကြေညာများမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေညာများသာ ဖြစ်နေတတ်၏။ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ ဖတ်ရှုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေသော ကြေညာများကို မြင်တွေ့ရဖန်များလွန်းသည့်ကြားထဲမှ ဤကြေညာလေးသည် မပြောင်းမလဲပါရှိနေခြင်းကလည်း ကျွန်တော်၏ စိတ်ဝင်စားမှုဒီဂရီကို မြင့်တက်လာစေပါသည်။ ကြေညာပါစာသားမှာ အထက်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ထူးထူးခြားခြား ဆွဲဆောင်မှု ရှိလှသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ သာမန်ရေးရိုးရေးစဉ် တိုတိုတုတ်တုတ်မျှသာဖြစ်၏။
ကြေညာပါ စာသားအရ အဓိပ္ပာယ်မှာ အင်မတန်ပဲ ရှင်းလင်းလွန်းလှပါသည်။ ဇာထွန်းဟုအမည်တွင်သော လူတစ်ယောက်ကို သူ (ဇာထွန်း) ၏ အစ်ကိုဟု ယူဆရသော မင်းဟန် အမည်ရှိ လူတစ်ယောက်မှ အမြန်ပြန်လာစေလိုခြင်းဖြစ်၏။ ပြန်လာစေလိုသည့် အကြောင်းမှာ ကလေးစိတ်ထိခိုက်နေ၍ ဖြစ်သည်။ ရှင်း၏။ သို့ရာတွင် ဤသည်မှာ ကြေညာ စာသားအရ ရှင်းလင်းမှုဖြစ်ပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ယုတ္တိဗေဒအရတွင်မူ ဤကြေညာစာသားသည် ပြီးပြည့်စုံသော ရှင်းလင်းမှုဖြစ်ရန် မလုံလောက်ပါ။
ဇာထွန်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ ဇာထွန်းကတော့ ဇာထွန်းပဲဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဇာထွန်းသည်အဖိုလား၊ အမလား လိင်ခွဲခြားမပြထားပါ။ ထို့အပြင် ဇာထွန်းဆိုသည့်အမည်ကိုယ်၌ မှာပင် ပြဿနာတစ်ခုက အသင့်ရှိနေသည်။ တခြားမဟုတ်။ ဇာထွန်းဆိုသည့် အမည်သည် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော မှည့်ခေါ်လို့ရသည့် နာမည်ဖြစ်နေခြင်းပင်။ အကယ်၍ ဇာထွန်းနေရာတွင် ဖိုးတုတ်ဟု ကြေညာရှင်က ဖော်ပြပါက ဖိုးတုတ်သည် မည်သို့မျှ အမဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ မြန်မာလူမျိုးများတွင် မဖိုးတုတ်ဟု မှည့်ခေါ်သော အမျိုးသမီးရှိ မည်မထင်ပါ။ ခက်တာက ကြေညာရှင်က ဖိုးတုတ်ဟုမရေး။ ဇာထွန်းဟုရေး၏။ ထို့ကြောင့် ဇာထွန်းသည် မဇာထွန်းဖြစ်နိုင်သလို မောင်ဇာထွန်းလည်း ဖြစ်နေနိုင်သည်။ ပြီးတော့ အစ်ကိုမင်းဟန်ဆိုသူက ဇာထွန်းနှင့် မည်သို့သက်ဆိုင်တော်စပ်နေပါသနည်း။ မောင်နှမရင်းချာလား။ ညီအစ်ကိုရင်းချာလား။ ၀မ်းကွဲလား။ ချစ်သူတွေလား၊ လင်မယားလား။ စိတ် ထိခိုက်နေသည့် ကလေးကရော ဇာထွန်း၏ ကလေးလား။ အစ်ကိုမင်းဟန်၏ ကလေးလား။ နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်သော ကလေးလား။ ဇာထွန်းနှင့်မင်းဟန် တစ်ဦးမှ မဆိုင်သည့် တခြားကလေးတစ်ယောက်လား။
ကလေးဆိုရာတွင်လည်း ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ခွဲခြားမထား။ ဥပမာ- သားသား၊ မီးမီး စသဖြင့်။ ပြီးတော့ ကလေး၏ အသက် ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ဖော်ပြမထား။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် ကလေးဟု ခြုံငုံဖော်ပြထားခြင်းအားဖြင့် ဇာထွန်းနှင့် မင်းဟန်တို့ထက် အသက်အရွယ် အသိဥာဏ်မှာ အတော်ကလေး ငယ်ရွယ်နုနယ်သူဖြစ်နေတာတော့ သေချာ၏။
အစ်ကိုမင်းဟန်ဆိုသူကရော ဘာကြောင့် ကလေးစိတ်ထိခိုက်တာကို အရေးကြီးကိစ္စလုပ်ကာ သတင်းစာထဲ ကြေညာထည့်ပြီး ဇာထွန်းကို အမြန်ပြန်လာစေချင်ရတာလဲ။ ဇာထွန်း ထွက်သွားလို့ ကလေးက စိတ်ထိခိုက်သွားရတာလား။ မူလကပင် စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ကလေးကို ဇာထွန်းက ထားသွားခဲ့တာလား။ ဒီနေရာတွင် တစ်ခုစဉ်းစားစရာရှိလာတာက စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ကလေးကို ဇာထွန်းကလွဲပြီး တခြားသူ ဘယ်သူမှ မနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်သည့် သဘောကို တွေ့ရသည်။ ကြေညာရှင်ဖြစ်သူ အစ်ကိုမင်းဟန်ကိုယ်တိုင်တောင် တတ်နိုင်ပုံမရ။ တခြားဖက်မှလှည့်တွေးမည်ဆိုပါကလည်း အစ်ကိုမင်းဟန် သည် ကလေးစိတ်ထိခိုက်နေသည်ကို အကြောင်းပြ၍ ဇာထွန်းပြန်လာရန် တစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် ခေါ်ခြင်း လား။ ဒါဆိုလျှင် ကလေးသည် ဇာထွန်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးရမည်။ ဒါမှမဟုတ် ဘာကိုမှ နောက်ဆံမတင်းဘဲ ထွက်သွားသော ဇာထွန်းကိုခေါ်ယူရန် နောက်ဆုံးမျှော်လင့် ချက်ဖြင့် ကလေးစိတ်ထိခိုက်နေသည်ဟု အကြောင်းပြလိုက်ခြင်းလား။ ကလေးက တကယ်ပဲ စိတ်ထိခိုက်နေ၍ အစ်ကိုမင်းဟန်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ကာ ဇာထွန်းကို ခေါ် လေသလား။ သေချာတာတစ်ခုတော့ရှိ၏။ ဇာထွန်းက ကလေး နားမှာ အခုမရှိ။ အဝေးတစ်နေရာသို့ ရောက်နေပြီဆိုတာပင်။
ဇာထွန်း၊ အစ်ကိုမင်းဟန်နှင့် ကလေး။
ဤသုံးယောက်သည် တစ်ချိန်သောအခါကတော့ နေရာဒေသတစ်ခုတွင် အတူတကွနေထိုင်ပြီး နေ့ရက်များစွာကို နွေးထွေးစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဇာထွန်း၏ မွေးနေ့ သော်လည်းကောင်း၊ အစ်ကိုမင်းဟန်၏ မွေးနေ့သော်လည်းကောင်း၊ ကလေး၏ မွေးနေ့သော်လည်းကောင်း တစ်ရက်ရက်တွင် ရောင်စုံဖယောင်းတိုင်များကို မွေးနေ့ရှင်မှ ငြိမ်း မှုတ်ပြီး မွေးနေ့ကိတ်ကို သူတို့အားလုံး အလုအယက် လှီးဖြတ်ကာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရပေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် လူချစ်လူခင်များသူများဖြစ်ခဲ့ပါက ထိုအခါမျိုးတွင် သူတို့ သုံးယောက်သာမက အခြားခင်မင်သူ သူငယ်ချင်းဆွေမျိုးအနည်းအကျင်းလည်း သူတို့နှင့်အတူ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်သေးသည်။ ဤနည်းဖြင့် နှစ်သစ်ကူးနေ့ရက်များ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ရာသီများနှင့် ရိုးရာပွဲတော်ရက်များကို သူတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့လည်း လူ့သဘာဝတွေ့ကြုံရနိုင်သည့် မပြေလည်မှုလေးများကို သူတို့သုံးယောက် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သေး၏။ ထိုအချိန်ကာလများတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှုလွဲကာ အနည်းငယ်သော ကတောက်ကဆဖြစ်မှုလေးများသည် သူတို့ကြားတွင် ပေါ် ပေါက်လာတတ်ဦးမည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုစဉ်ကတော့ ထိုအခက်အခဲများကို သူတို့သည် တနည်းနည်းဖြင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်ချည်းပဲဖြစ်၏။ အကြောင်းကတော့ မည်မျှ ကြီးမားသော အဆင်မပြေမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပါစေ သူတို့သည် အချင်းချင်း မခွဲခွာခဲ့သဖြင့် ၀မ်းနည်းမှုထက် ပျော်ရွှင်မှုက ပို၍များပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် အခုတော့….
အခုတော့… သူတို့သုံးယောက်အား မည်သို့သော ပယောဂ ကြီးကြီးမားမားက အခုလို တကွဲတပြားစီဖြစ်လာရန် အကြောင်းဖန်ခဲ့ လေသနည်း။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေ၍လား။ လူမှုရေးမနိုင်ဝန်တွေကြောင့်လား။ အမှုအခင်းတစ်ခုခုပဲ တွေ့ကြုံရလို့လား။ နံဘေးမှ သွေးထိုးကုန်း တိုက်တတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြင်းကြောင့်လား။ ပြဿနာအမျိုးမျိုး လုပ် တတ်သော ဆွေမျိုးတွေကြောင့်လား။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သတင်းစာကြေညာဖတ်ရှုသူများအနေဖြင့် အဖြစ်မှန်ကို သိရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကြေညာပါစာသားကို ဖတ်ရသည်ကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပင်။ အထူးသဖြင့် အသိဥာဏ်ငယ်ရွယ်နုနယ်သော စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ကလေးအတွက် ဖြစ်သည်။
လအနည်းငယ်ကြာမြင့်ပြီးနောက် တစ်ရက်တွင် ကျွန်တော်သည် စာအုပ်စင်ပေါ်မှ သတင်းစာအဟောင်းများကို ရှင်းလင်းနေစဉ်အတွင်း ဤကြေညာကလေးအား အမှတ်မထင် ပြန်၍ မြင်တွေ့မိလိုက်၏။ ကျွန်တော်၏ စိတ်ထဲတွင် ကာလအတန်ကြာနေရာယူခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်သော ဤကြေညာကလေးသည် ကျွန်တော့်အား အတွေး များစွာ ပြန်ပေးနိုင်သေးသည်ကို အံ့သြစွာ သိရှိလိုက်ရ၏။ သတင်းစာတွင် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ပါရှိပြီးနောက် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော ဤကြေညာအတွက် မေးခွန်းများစွာ ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေပါသေးသည်။ ရက်သတ္တနှစ်ပတ်နောက်ပိုင်းတွင် ဇာထွန်းသည် ကြေညာရှင်ဖြစ်သူ အစ်ကိုမင်းဟန်ထံ ပြန်လာခဲ့ပါသလား။ စိတ်ထိခိုက်နေ သည့် ကလေးကရော ပြန်၍ နေထိုင်ကောင်းသွားခဲ့ပါလား။ ဒါမှမဟုတ် ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ဆက်တိုက် ကြေညာထည့်တာတောင် ဇာထွန်းတစ်ယောက် ပြန်မလာခဲ့သည့်အတွက် ကြေညာရှင်မင်းဟန်မှာ စိတ်မာန်လျှော့ကာ နောက်ထပ်ကြေညာမထည့်တော့ခြင်းလား။ စိတ်ထိခိုက်နေသည့်ကလေးကိုလည်း ဖြစ်လိုရာဖြစ်ဆိုကာ ပစ်ထားလိုက်ပြီလား။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းများအတွက် အဖြေကတော့ ရှိမနေခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အများအားဖြင့် သတင်းစာကြေညာများသည် လင်မယားပြန်ပေါင်းထုတ်ခြင်း၊ သား/သမီး အဖြစ် အမွေစားအမွေခံ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူပျောက်ပြန်တွေ့ခြင်း စသည့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များအား ဆက်လက်ကြေညာလေ့ မရှိသောကြောင့် ဖြစ်လေ၏။
Idea၊ မေ၊ ၂၀၁၀
4 Comments Posted in လွန်းဆက်နိုးမြတ် ၀တ္ထုတိုများ